Ahoana ny fanatsarana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny Marketing Digital | Martech Zone
Tsy azonao atao ny mitazona izay tsy azonao. Rehefa mifantoka amin'ny fahazoana mpanjifa tsy tapaka dia mora ny entina. Eny ary, noho izany dia hitanao ny paikadin'ny fahazoana, nataonao mifanaraka amin'ny fiainan'ny mpanjifa ny vokatrao / serivisinao. Ny soso-kevitra momba ny sanda tokana anao (UVP) dia miasa - mitaona ny fiovam-po izy ary mitarika ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Fantatrao ve izay hitranga aorian'izany? Aiza no ahitan'ny mpampiasa aorian'ny fahavitan'ny tsingerin'ny varotra?
Atombohy amin'ny fahazoana ny mpihaino anao
Na dia mahafinaritra aza ny mahita hatrany fantsona sy mpihaino vaovao hamidy, dia lafo lavitra kokoa ny mitazona ny iray. Na izany aza, ny fihazonana dia tsy miankina amin'ireo mpamily mitovy amin'ny fahazoana azy - tsy mitovy ny tanjona ao aoriany, ary na dia ny fitondran-tena sy ny fihetseham-po avy amin'ny roa tonta aza dia mifameno izy ireo ka tokony hitondrany vahaolana tsirairay. Ny tsy fivadihan'ny mpanjifa dia miorina amin'ny fihazonana azy. Ny fidirana amin'ny mpanjifa dia varavarana fidirana ho azy fotsiny.
Ny zava-dehibe entina eto dia ny fahafantarana fa ny mpanjifanao dia tsy hanjavona aorian'ny tsingerin'ny varotra fa manohy mifandray amin'ny vokatrao / serivisinao ary mampifandray azy ireo izany amin'ny marikao.
Ka inona no fantatrao momba ny mpanjifanao?
Mba hamenoana ny sarin'ny fihetsiky ny mpihaino anao alohan'ny sy mandritra ny tsingerin'ny varotra ary ampidiro ao anaty paikady fitazonana anao ny zavatra hita dia mila manangona tahiry be dia be ianao. Inona avy ireo Fepetra momba ny angon-drakitra mba dinihina? Azonao atao ny manomboka amin'ny fanombanana ny:
Search Metrics marketing
Ahoana no ahitan'ny mpampiasa anao? Inona avy ireo fangatahana fikarohana tsy misy marika na tsy marika, amin'ny farany, mitondra any amin'ny fivadihana na amin'ny fividianana? Inona avy ireo pejy fidirana an-tampony nanao fampisehoana ary aiza ny fantsona leakiest? Azonao atao ve ny mamatotra ny atiny manokana amin'ny demografika mpampiasa manokana izay nitondra anao ny haben'ny varotra lehibe indrindra?
Raha manana ny fanarahan-dia Google Analytics ianao afaka sy tafiditra ao amin'ny Google Search Console, azonao atao ny manara-maso ireo fangatahana ireo hatramin'ny 16 volana lasa izay ary mamantatra ireo izay nahavita be indrindra. Azonao atao ny manatsara kokoa ny famakafakana amin'ny alàlan'ny fametahana ireo teny lakile ireo amin'ny pejy fampandrenesana manokana ary mamantatra azy ireo ho toy ny teboka fanombohana mety tsara amin'ny dian'ny mpampiasa mankany amin'ny fahazoana. Ity dia azo ravana lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ity angona ity amin'ny demografia, ny karazana fitaovana, ny fitondran-tena ary ny fahalianan'ny mpampiasa anao hahafantarana ireo karazana mpihaino izay mety hiova.
Manao ahoana ny varotrao? Inona ny salan'isan'ny baiko nomarihinao? Ohatrinona ny salan'isan'ny tahan'ny fividiananao miverina? Inona ny vokatrao / serivisinao ambony indrindra ary misy ifandraisany amin'ny demografikan'ny mpampiasa sy ny fironana amin'ny fizaran-taona?
Raha manana fananganana fanaraha-maso E-varotra mihombo amin'ny alàlan'ny Google Analytics ianao na raha tsy hoe dashboard lozisialy antoko fahatelo ho azy, dia ho azonao atao ny manara-maso ireo rehetra ireo ary manangona hevi-dehibe. Ny zava-dehibe indrindra tokony hotadidina dia ny metrika mivarotra miovaova be amin'ny habetsaky ny fizarana voadinika. Ny varotra fizaran-taona na fironana dia mety hiseho ho tsy ara-dalàna raha jerena mandritra ny fotoana fohy ka tazomy ny masonao ary zahao ireo tahirin-kevitra ao anatin'ny fe-potoana mitovy amin'ny vanim-potoana izay mialoha azy na ao anatin'ny fe-potoana mitovy tamin'ny taona teo.
Fantsona fahazoana sy referansa
Fantatrao ve hoe avy aiza ireo mpanjifanao? Inona avy ireo fantsom-pahombiazana lehibe azonao? Ireo fantsona ireo ihany ve no ahitany anao, sa izy ireo no fantsona tsotra izay mitondra ny ankamaroan'ny varotra? Inona avy ireo fantsona mitondra ny karama indrindra?
Raha heverinay fa ny tranokalanao no teboka fiovanao voalohany ary manana ny fananganana Google Analytics ianao, afaka mamaly mora foana ireo fanontaniana voalaza etsy ambony ianao. Tsidiho ny fisamborana> tatitra momba ny topy maso hahitana hoe iza amin'ireo fantsona no mitondra ny fifamoivoizana betsaka indrindra ary manana fihenam-bidy kely indrindra. Azonao atao ny manatsara ny fandalinana amin'ny alàlan'ny fanovana ny sangan'ny mpihaino Ny mpampiasa rehetra ny Converters. Raha manana tanjona na vondrona vondrona tanjona mihoatra ny iray ianao dia afaka manaparitaka bebe kokoa ny fampitahana ny fantsona amin'ny tanjona iray manokana.
Nopotehina sy nopetahany rafitra ny data rehetra etsy ambony, azonao atao izao ny maka sary an-tsaina ny karazana mpihaino izay azo inoana fa hiova, ny lalan'izy ireo mankamin'ny sy aorian'ny teboka fiovam-po ary ny fomba fitondran'izy ireo teo aloha, mandritra ary aorian'izy ireo manao fividianana.
Ny fananganana persona mpanjifa ho toy ny solontena noforonina ho an'ny mpanjifanao tonga lafatra dia hanampy anao hivarotra ny vokatrao kokoa ary hahafantatra izay nahatonga azy ireo nifidy anao ho mpivarotra / mpamatsy. Izany no hazavaina tsara indrindra rehefa alaina sary an-tsaina ka andao hametraka ohatra iray. Lazao fa mivarotra boky fahandro ianao ary ny tanjonao dia ny hampitombo ny isan'ny varotra ary hampiroborobo ireo andiany vaovao ho an'ny Thanksgiving ho avy ka ho lasa mpanjifa vaovao sy efa misy. Iza amin'ireto no mora aminao kokoa?
"Tianay ny mampiroborobo ny andian-dahatsoratra nahandro an'ity Thanksgiving ity amin'ny Instagram sy Pinterest. Ny tanjonay dia ny vehivavy, 24-55 taona izay tia mahandro ary efa nividy na nieritreritra ny hividy boky mahandro amin'ity taona ity ”
“Ny tanjonay dia ny hampiroborobo ny andian-dahatsoratra nahandro ho an'i Martha. Mijanona ao an-trano reny izy, eo amin'ny faha-40 taonany izay tia mahandro. Tiany #foodporn pejy ary mizara ny lovia ao amin'ny Instagram. Izy dia mpandala ny nentin-drazana ary mankafy ny soatoavina nentim-paharazana ka ny fialantsasatra lehibe dia zavatra lehibe ho azy satria ireo no fotoana tokana amin'ny taona ahafahany mahandro sakafo ho an'ny ankohonany manontolo sy ny namany. Efa nividy boky mahandro avy aminay i Martha ary nanamarina ny fahana Instagram sy tranokalanay momba ny fomba fahandro vokarin'ny fiaraha-monina farafahakeliny indray mandeha isam-bolana. Tena mahandro sakafo matsiro sy sakafo biolojika izy. ”
Mahita ny tsy fitovizany? Ity karazana solontenan'ny persona ho an'ny mpanjifa ity no azonao atao amin'ireo metatra voalaza etsy ambony nilahatra tamina rafitra.
Ity karazana analytics an-tsokosoko ity dia sarotra apetraka ary mandeha ao anaty fahasarotana. Raha sarotra loatra aminao izany dia tokony ho izany tokoa mitady fanampiana avy amin'ny maso ivoho nomerika izay manana traikefa amin'ny famakafakana mandroso ny mpihaino, fizarana ary fanatsarana ny fanentanana.
Taktika ara-barotra matetika hitazomana sy ireo KPI mpanaja azy ireo
Ankehitriny rehefa fantatrao ny toetran'ny mpanjifanao sy azonao ny fihetsik'izy ireo dia nanjary mazava kokoa ny fomba ahafahanao miasa amin'ny fitazonana azy ireo. Ny tetika fivarotana fihazonana dia mety miovaova arakaraka ny akany, ny tsena, ny mpanjifanao ary ny tanjonao, fa ny rafitra mamaritra ny famaritana azy ireo kosa dia tsy miova.
Ny paikady marketing amin'ny fitazonana sasany dia maitso mandavantaona ary voamarina im-betsaka. Mazava ho azy, raha jerena ny fiheverana fa ny data dia napetraka tamin'ny dingana teo aloha.
Na dia heverina ho tetika fividianana aza ny SEO, dia manolotra isan'ny fotoana hanatsarana ny fitazonana ny mpanjifa sy hananganana tsy fivadihana.
Atao amin'ny alàlan'ny fanatsarana atiny indrindra izany - na eo an-toerana na any ivelany. Amin'ny alàlan'ny famaritana ireo teny lakile, atiny ary loharanom-pahalalan-kevitra momba ny fifandraisan'ny mpanjifanao sy ifandraisany amin'izy ireo, dia manakaiky kokoa ny fanatontosanao manokana ny atiny hisintomana sy hitazomana ny sain'izy ireo Ampiasao ny metatra marketing amin'ny fikarohana amin'ny paikadin'ny marketing fihazonana SEO anao ary mamorona tondrozotra atiny.
Aza mifantoka amin'ny teny fanalahidy fohy fotsiny fa manandrama manandratra ny fifandraisany amin'ireo lohahevitra mifandraika amin'izany. Azonao atao izany mikarokaroka teny laksa LSI sy syntagms amin'ny teny lakile izay mikendry ny fahalianan'ny mpampiasa sy ny tanjony. Andao hiverina any amin'ny fampiroboroboana ny bokin'i Marta. Ireo lohahevitra izay mety hitarika an'i Marta hividy boky mahandro hafa avy aminao dia ny fomba fahandro miadana, ny pantry ary ny vilany ampiasaina azy ireo, ny fisafidianana ireo akora voasivan'ny vanim-potoana na ny fomba fitomboany sy ny fonosany. Mety hitarika amin'ny fividianana boky fandrahoana sakafo i Martha raha toa ka milaza ny tenany ho hazondamosin'ny fianakaviana izy ary mahita ny latabatra fisakafoanana ho toy ny teboka fanangonana, soatoavina eo amin'ny fiaraha-monina sy ny fianakaviana. Aza terena fotsiny ny mpampiasa hamantatra tena ho ampahan'ny ampahany lehibe, fa miezaha hanao ho azy manokana ny zavatra niainany.
Lafiny ara-teknika sasany amin'ny SEO, indrindra amin'ny lafiny fanatsarana eo an-toerana toy ny tranokala marindrano sy ny maritrano fampahalalana miaraka amina HTML5 sy markup microdata voarindra no Ampio ireo mpikaroka hahafantatra tsara ny firafitra sy ny semantika ao aoriany. Izany dia manampy amin'ny fahitana sy ny fanamorana ny pejin'ny valim-pikarohana arakaraka ny safidin'ny mpampiasa kendrena. Ohatra, ny fanamarihana tranokala fananganana sy ny semantika dia hanampy hampiseho valiny samihafa amin'ny olona samihafa toa izao:
Rehefa mitady boky mahandro amin'ny alàlan'ny motera fikarohana i Martha, dia azo inoana fa hahazo bokin-tsakafo mahandro mahandro mahamenatra izy rehefa miverina ny valiny.
Rehefa mitady boky mahandro amin'ny alàlan'ny motera fikarohana aho dia mety hahazo Anbookist Cookbook ho vokatra azo.
Ny lafiny teknika hafa mifandraika amin'ny fampiasana sy ny fahombiazan'ny tranokala toy ny fotoana lanin'ny pejy, ny fandraisana andraikitra ary ny fahazoana dia zava-dehibe amin'ny SEO izay miorina amin'ny fitazonana ny mpampiasa ary manampy amin'ny fananganana tsy fivadihana. Raha tsy azo idirana na sarotra ampidirina ny tranokalanao, dia azo inoana fa hitsambikina na tsy dia miraharaha azy ny mpampiasa.
Ireo KPI nanolo-kevitra hanaraka:
Isan'ny rohy mankany anaty
Isan'ny rohy ivelany
Ny haben'ny fifamoivoizana organika
Ny haben'ny fampitana fifamoivoizana
Pejy valin'ny motera fikarohana (SERP) toerana ho an'ny teny fanalahidy voafantina
Ny fomba fijery isaky ny fotoam-pivoriana
hitoetra fotoana (salan'isa eo amin'ny pejy)
Aza kivy taha
Ny media sosialy dia fantsona lehibe hananganana fahatsiarovan-tena, fahatokisana ary fahatokiana. Manako be izy io amin'ny fifandraisan'ny tetika fitanana SEO / SEM. Miaraka amin'ny marketing influencer dia eo am-baravaranao ny fananganana mpisolo vava marika hampitombo ny fihazonana sy ny kalitao farany.
Rehefa ampifandraisina amin'ny kalandrie fanontana / famoahana napetrakao ho an'ny tanjona marketing hitazomana SEO ary ampiarahana amin'ny tenifototra misy marika sy ny fanarahana ny rohy dia lasa fantsona matanjaka amin'ny fananganana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa izany.
Afaka mampiasa tenifototra misy marika ianao ary manara-maso ny rohy hahafantarana sy hijerena ireo fotoana vaovao hisarihana ary hikitika ny loharanon'ny mpisolovava marika mety hitranga. Angamba ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny haino aman-jery sosialy dia ny fotoana ahafahanao mirotsaka an-tsehatra amin'ny tanjaky ny mpanjifanao sy misy anao amin'ny fotoana tena izy. Mampiasa chatbots ary manabe ny mpiasao varotra hampiasa haino aman-jery sosialy ho ampahany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao no tetika tokana tsy jerena indrindra izay manao fahagagana amin'ny fananganana ny fitazonana sy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa.
Isan'ny mpanara-dia ary ireo mpankafy
Engagement isa - samy fampielezana na pejy manokana
Isan-jaton'ny fampitana fifamoivoizana novokarina tamin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy
The habetsahan'ny atiny natosika ho ampahany amin'ny fizarana marketing
Isan'ny nahavita ny fangatahana serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny resaka media sosialy, hevitra ary hafatra
Tsy ho faty mandrakizay ny mailaka ary fampitaovana ifotoran'ny asa sy fampiasana web rehetra io.
Ny marketing amin'ny mailaka dia matetika ampiasaina ho mpamily voalohany ny fitazonana ny mpampiasa sy ny hetsika famanam-batana mangatsiaka mitarika. Tetika roa mahazatra indrindra amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny mailaka hanatsarana ny fitazonana ny mpanjifa dia ny fandefasana mailaka miaraka amin'ny vaovao farany sy ny fanavaozana ny atiny ary hitaona ny fividianana miverimberina amin'ny alàlan'ny fanomezana fihenam-bidy sy fifanarahana amin'ny tobin'ny mpanjifa efa misy.
Ny fikolokoloana atiny ho an'ny iray amin'ireto tetikady ireto dia azo ampifandraisina amin'ny kalandrie fanontana anao mba hanomezana valiny tsara indrindra amin'ny resaka tahan'ny fisokafana sy ny CTR. Azonao atao ihany koa ny manaparitaka ny ezaka ataonao amin'ny fizarana lisitry ny mailaka mifanaraka amin'ny safidin'ny mpampiasa, ny fironana amin'ny vanim-potoana ary ny demografika.
saingy Ny marketing amin'ny mailaka dia tokony hatonina am-pitandremana bebe kokoa noho ireo voalaza etsy ambony ireo. Ny fidorohana diso tafahoatra sy ny fikirakirana tsy dia tsara loatra dia mety hahatonga ny sehatr'asanao manontolo hiditra anaty lisitra mainty ary hanimba tanteraka ny fahatokisana naorina hatreto. Ny zavatra lehibe manamarika eto dia ny fahafantaran'ny mpampiasa anao ny fomba nahatongavany tamin'ny mailaka nataonao, ahoana ny fomba hitondranao azy ary omena fotoana hanitsiana ny safidiny izy na hisoratra anarana amin'ny fotoana rehetra.
Rehefa manapa-kevitra ianao raha hampiasa ny mpizara mailaka anao na serivisy antoko fahatelo ho azy, dia miangavy anao azafady raha afaka manaraka ny lalàna rehetra voalaza etsy ambony ianao ary manana fahaizana mandrefy sy manara-maso ny zava-bitany.
Isan'ny mailaka nalefa mivoaka - fampielezana manokana sy amin'ny ankapobeny
Kitiho ny taha (CTR) mailaka
Tombana misokatra ny fanentanana mailaka nalefa
Avereno ny tahan'ny fividianana amin'ny alàlan'ny fantsona mailaka
Manaraha, mandrefy ary manatsara ny fitomboana
Araka ny voalaza tetsy aloha, mba hanatsarana ny fahatokisan'ny mpanjifanao amin'ny marketing nomerika dia mila mahatakatra ny mpanjifanao ianao. Misy rafitra marobe ho an'ny famakafakana ny mpanjifa hizaha sy hifanaraka amin'ny ezaky ny marketing mihazona anao. Ny famolavolana paikady marketing fihazonana ny mpanjifa dia mety miovaova arakaraka ny orinasa ka hatramin'ny marika fa ny tanjon'ny fizotrany dia mifanaraka.
Ny fandrefesana lalina sy ny fanatsarana ny fizarana tsirairay amin'ny dian'ny mpanjifanao dia fanombohana lehibe fa hanome anao angon-drakitra tsy voarindra. Ny fomba fampiasanao an'ity angona ity hanontany sy hanome valiny amin'ny fanontaniana manokana momba ny fihetsik'izy ireo ankoatry ny fahavitan'ny tsingerin'ny varotra dia hamaritra ny fahombiazanao amin'ny fananganana fifandraisana maharitra miaraka amin'ny tobin'ny mpanjifanao.
Ary avy amin'ny fihazonana dia mitombo ny tsy fivadihana sy ny fahatokisana.
Tags: fantsom-pandraisanabounce ratetahan'ny click-throughtahan'ny click-througholona mpanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifafangatahana serivisy ho an'ny mpanjifaHafanàm-po an-barotrafotoana iainanametatra marketing amin'ny mailakatahan'ny fifanakalozanampankafympanara-diaGoogle Analyticsrohy mankany anatypifidiananakpimetatra marketingtahan'ny misokatrafifamoivoizana organikarohy ivelanypejy fahitanajery pejy isaky ny fizaranaolonafampitana fifamoivoizanaavereno ny tahan'ny fividiananafantsona fihazonanametatra fihazonanametatra fivarotanapejy valin'ny motera fikarohanamari-pahaizana momba ny varotra fikarohanaserptakelaka media sosialy